Ogaden News Agency (ONA) – URURKA OYSU OO 30 GUURADA JWXO UGU HAMBALYEEYAY
URURKA OYSU OO 30 GUURADA JWXO UGU HAMBALYEEYAY
Wuxuu Ururka Midawga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadeniya ee OYSU ugu Hambaliyaynayaa dhamaan Shacabka Ogadeniya ee Gobanima-doonka ah, Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadeniya, Madaxda iyo Kaadirka JWXO iyo dhamaanba Jaaliyaadka Ogadeniya meel walbooy joogaan Sanad-guurada 30naad ee ka soo wareegtay Aasaaskii Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadeniya (JWXO).
Kadib aasaaskii JWXO ee sanadkii 1984, 15kii bishii August ayaa waxaa suuragalay in shacabka Ogadeniya ee dulman uu yeesho Cod iyo Awood siyaasadeed oo matala soona bandhiga Doonidda Aayo-katashi iyo Madax-banaanida Umadda Ogadeniya.
JWXO oo muujisay 30kaa sano Mintidnimo ayaa waxay si heer qaran ah ugu guulaysatay inay meel mariso Qadiyadda iyo Mabaadi’da Siyaasadeed ee lagu baadigoobayo Xoriyadda dalka iyo shacabka Ogadeniya taasoo gumaysigu geed dheer iyo geed gaabanba uu ukoray sidii uu usoo afjari lahaa.
Sidoo kale waxay JWXO muujisay 30ka sano ee ay dagaalka hubaysan iyo kan siyaasadeedba kula jirtay cadawga Itoobiya Midnimo qoto dheer leh, taasoo inbadan han-jabisay cadowa kadib kolkii uu awoodiisa siyaasadeed iyo tan dhaqaaleba uu isugu-geeyay sidii uu uburburin lahaa ama isaga horkeeni lahaa shacabka dagaalyahanka ee Ogadeniya.
Waxaa kaloo xusid mudan in 30kaa sano ay JWXO muujisay Ururnimo iyo Iskutashi taasoo u horseeday inay ka kaaftoomaan faragalinta iyo ku xidhnaanshaha safaaradaha shisheeye ee danaha gaarka leh. Waxayna arinta cadowga gaamuray baday inuusan helin meel afkaarihiisa uu kasoo galiyo miiska qorsho dajinta ee JWXO.
Ugu danbayntii, wuxuu ururka OYSU markale Bogaadin iyo Hambaliyo usoo gudbinayaa Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadeniya oo run ahaantii Guul joogta maadaama ay wili cadowga ay ka horjoogto damaciisa ah inuu boobo dhulka Ogadeniya; maadaama ay tubta toolmoon ku soo riday halgankii sooyaalka ahaa ee Ogadeniya siyaasiyan; madaama Ogadeniya tahay umadda Soomaaliyeed ee kaliya ee ka madaxbanaan gumaysiga Itoobiya. Sidaas awgeedna waxay wayni oo dhan usugnaatay Allihii soo barbaariyay Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadeniya kana soo badbaadiyay Hagardaamada gumaysiga iyo Halis oo dhan.
Midawga Dhalinyarada Iyo Ardayda Ogadenia.